Wislawa Szymborska: ndiani uye ndeapi mabhuku aakanyora | Zvazvino Zvinyorwa
Wislawa Szymborska Tsime: the2banks
Wislawa Szymborska Ndiye mumwe wevanyanduri vasingazivikanwe pasi rose, kunyangwe hazvo, muna 1996, akahwina Mubayiro weNobel weMabhuku. Nehurombo, hatichakwanisi kuvimba nekuvapo kwake, sezvo akashaya muna2012, asi basa rake rinoramba richitsungirira nekufamba kwenguva uye zvirokwazvo wakambozviona pane imwe nguva.
Asi, Ndiani aive Wislawa Szymborska? Akanyora chii? Sei uchizivikanwa zvakadaro munyika yako nekunze? Pazvose izvo, uye zvimwe zvakawanda, ndizvo zvauchazoziva nhasi.
1 Wislawa Szymborska ndiani
2 Wislawa Szymborska mune zvinyorwa
3 Akanyora mabhuku api
Wislawa Szymborska ndiani
Wislawa Szymborska harisi iro zita rake chairo. Zita rakazara remunyori uyu raive Maria Wislawa Anna Szymborska. Akazvarwa muProteent muna 1923 (izvozvi ndizvo zvatinoziva seKórnik, muPoland).
Baba vake vaive mudiri kuna Count Wladyslaw Zamoyski, muridzi weguta reKórnik, uye paakafa gore rakatevera, aireva kuti mhuri yaifanira kuenda kuTorun, uko Wislawa Szymborska akakurira.
Akanga achinyatsoziva, zvekuti, pazera ramakore mashanu, apo aidzidza kuchikoro, akatanga kunyora nhetembo. Izvo zvinofanirwawo kutaurwa kuti munhu wese mumhuri yake aive anoverengera kuverenga, uye vaigara vachiverenga nekukakavara nezve mabhuku. Kunze kwezvo, iye aive ne "mubairo." Uye ndezvekuti nhetembo dzese dzaWislawa Szymborska dzakapfuura nemaoko ababa vake, uye kana achivafarira, akabva amupa mari semubairo, yaaigona kutenga nayo chero chaaida.
Muna 1931 vaifanirwa kutama zvakare uye, kunyangwe akanyoresa pachikoro chemasangano muKrakow, haana kupedza zvidzidzo zvake ipapo. Panguva ino chimwe chekutambudzika kwakamuratidzira kwaive, pasina mubvunzo, kufa kwababa vake. Mhuri haina kuzofamba zvakare, asi yakagara muKrakow uko, makore mashoma gare gare, nePiri Hondo Yenyika, muna 1940, vakatambura kutora kweGerman kuPoland.
Nekuda kweizvi, Matanda haakwanise kuenda kuzvikoro zveruzhinji. Asi izvo hazvina kumisa Wislawa Szymborska uyo akafunga kuenderera mberi nedzidzo dzake uye akazviita muchikoro chepasi pevhu, muWawel Castle. Nekudaro, muna 1941 akapedza zvidzidzo zvake zvesekondari.
Makore maviri gare gare, akatanga kushanda panjanji, nekudaro achidzivirira kuendeswa kuGerman kunomanikidzwa kushanda. Zvakare panguva iyi akashandisa iyo yakasara yenguva yake kugadzira mifananidzo yebhuku rechirungu uye kunyora ese ari maviri mapfupi nhetembo.
Kupera kweChipiri Hondo Yenyika kwakabatsira Wislawa Szymborska kunyoresa muJagiellonian University muKrakow, kwaakasarudza mabhuku ePoland asi akazopedzisira achinja mabasa kuita zvemagariro. Kunyangwe izvi, akatadza kupedzisa zvidzidzo zvake, asi akasiya chikoro muna 1948.
Nekudaro, panguva iyoyo pfupi yemudzidzi, akaburitsa nhetembo mumapepanhau nemumagazini.
Wislawa Szymborska mune zvinyorwa
Nhetembo yekutanga Wislawa Szymborska yakaburitswa muna 1945, mune yekuwedzera yekuwedzera kune iyo zuva nezuva Dziennik Polski. Musoro waro, ndinotsvaga izwi (Szukam slowa). Uye izvo hazvireve chete kuti zvaireva kutanga kwake, asi zvakare kuti vakavhura mikova yenhetembo dzake mumapepanhau nenhepfenyuro dzemuno.
Muna 1948, paakasiya koreji nekuti aisakwanisa kuiwana, akatanga kushanda semunyori wemagazini inodzidzisa, kunyanya iro pepanhau rakanga ramupa mukana wake wekutanga, Dziennik Polski. Uye, panguva imwecheteyo iye aive munyori, aishandawo semufananidzo uye mudetembi, sezvo akaramba achiburitsa nhetembo.
Muchokwadi, muna 1949, akange atove nemuunganidzwa wake wekutanga wenhetembo.
Nguva pfupi yapfuura, muna '52, akaburitsa imwe muunganidzwa wenhetembo, Dlatego zyjemy (Ndosaka tichirarama), ruzhinji rwavo ruzere nemafungiro ake ezvematongerwo enyika. Uye ndezvekuti panguva iyoyo akazove nhengo yePolish Workers Party, aine hunhu hwakakura hwehukama hwehukama hwekuti haana kutendeuka kwete chete muunganidzwa wenhetembo, asiwo mune inotevera, muna 1954, Pytania zadawane sobie (Mibvunzo yakabvunzwa wega).
Zvino, kunyangwe aive mugovanisi, makore matatu gare gare akaburitsa muunganidzwa mutsva wenhetembo, Walanie do Yet (Danai kuYeti) maakaratidza kujekesa kuora mwoyo uye kutyora nemafungiro iwayo echikominisiti, uye nemashandiro aakange achinja mukufunga kwake, asina kugutsikana nemabatiro akaita rudzi irworwo.
Uye zvakare, airatidza kunetsekana nevanhu, kunyanya Stalinism, kunyangwe kutsaurira nhetembo kuna Stalin kwaakamuenzanisa nemurume anonyangadza wechando (Yeti). Kusvika panguva iyoyo akaramba komiyunizimu nehukama zvekuti akaramba mabasa maviri awa aakaburitsa uye aisamboda kunzwa kubva kwavari zvakare.
Akanyora mabhuku api
Iwe unofanirwa kufunga nezve izvo Wislawa Szymborska akatanga kunyora kubva pamakore mashanu. Zvinonzi akasiya nhetembo dzinodarika mazana matatu nemakumi mashanu dzakanyorwa. Mumabhuku, iye akanyora anopfuura gumi neshanu enhetembo uye nhetembo. Asi kunyangwe ichizara kwazvo, hatigone kutaura kuti yaive nemukurumbira pasi rese, pachokwadi yakanga isina kudaro. Vaimuziva zvishoma munyika yake, asi kwete kunze kwayo. Sezvo zvaizivikanwa zvakanyanya, zvaive mune mamwe mabasa ake: kushoropodza zvinyorwa uye shanduro.
Saka riini mu1996 akapihwa mubairo weNobel weMabhuku, Wislawa Szymborska akashamisika, zvese kwaari uye kune avo vese vasina kumuziva kusvika panguva iyoyo. Ehezve, yakanga isiri iyo chete mubayiro waakapihwa. Pakutanga aive atove nevamwe, seMubairo wePurish Ministry of Culture, yakapihwa muna 1963; Mubairo weGoethe, muna 1991; kana iyo Herder Mubairo uye kuzivikanwa seHuremekedzwa Chiremba Wetsamba naAdam Mickiewicz University yePoznan, muna 1995.
1996 raive gore rakanaka kwaari, kwete chete nekuda kweNobel Prize, asiwo nekuti akapihwa iyo PEN Club Prize yePoland.
Makore gare gare, muna 2011, akagamuchira imwe yemubairo wake uchangoburwa, iyo Orla Bialego Order (Order yeWhite Eagle), kukudzwa kwepamusoro kwakapihwa muPoland.
MuSpain unogona kuwana chikamu chebasa rake rakashandurwa, mamwe emabhuku ndeaya:
Mamiriro nezviyo zvejecha.
Iyo hombe nhamba.
Anofara rudo nedzimwe nhetembo.
Pakupedzisira, tinokusiya uine imwe yenhetembo dzaWislawa Szymborska.
Chero ani anoziva kwaari
yetsitsi (fungidziro yemweya),
"Ngaazive!" , Ngaayambire!
Regai ndiimbe zvinonzwika
uye kutamba senge ndarasika njere
jubilant pasi pesimba risina simba
Nokusingaperi padanho rekutsemuka misodzi.
Ini ndinodzidzisa kuvhara
wedenga rine nyeredzi,
shaya dze sinantropus,
apo, yakashambidzwa muzuva kusvika pamutsipa,
unovata apo mhepo inotamba
(tenzi wekutamba kwebvudzi rako).
Inopa ku "Kurota".
kune vakwegura vari mumisha inochengetwa vakwegura
uya kumberi pasina mareferenzi
hapana zvikumbiro zvakanyorwa.
pasina kubvuma kutambira.
NEZVAKAVIMBISWA MURUME WANGU
-Kuti akakunyengedza nemavara
yenyika ine vanhu vazhinji, nemheremhere yayo,
ne couplet kubva pahwindo, nembwa
kuti haungambove uri wega
murima, wakanyarara uye unofema.
Husiku, chirikadzi yeZuva.
Tsika. Elzbieta Bortkiewicz
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Wislawa Szymborska
Noel perez akadaro
Ini ndaive mumwe weavo vakazozviona zvichinonoka uye vasina kumira kuve mumwe wevadetembi vangu vandaida. Yakawanda nhetembo dzakandishamisa, asi yekutanga yakandirova hapana mubvunzo kuti Iyo Nhamba Pi.
Pindura Noel Pérez
Daniel Martín Serrano. Kubvunzana nemunyori weInsomnia
Esteban González Pons, munyori weEllas. Kubvunzurudza